Tilmaamaha Buuxa ee Terrier-ka Godka Mareykanka - Taranka
The Godka Dibida Maraykanka (APBT, Pittie, ama Pitty) waa saad saafi ah oo inbadan adkeystay taariikhdeeda.
Laga soo bilaabo takoorida ilaa xadgudubka la dagaallanka eeyga, noocani wuxuu yeelan karaa sumcad khatar ah laakiin APBT si xun ayaa loo fahmay.
Taas bedelkeeda, Pit Bull waa muunad heer sare ah, adag iyo murqaha leh sifooyin shaqsiyadeed oo badan oo suuragal ah kana dhigaya kuwo waxtar u leh shaqada iyo sida eeyga qoyska.
Waa waqtigii dib loo soo bandhigi lahaa Bull Pull oo la soo bandhigo quruxda dhabta ah ee taranka this. Waxaan soo koobnay wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato!
Waa maxay Dabaysha Baaskiil Mareykan ah?
Sida loo tababaro Dibi Bull
Xaqiiq madadaalo: Pitties waxay jecel yihiin inay wax cunaan.
Dhibaatooyinka caafimaad ee suurtagalka ah ee Godka Dulliga Mareykanka
Siinta Pitty-kaaga cuntada saxda ah
Qiimaha lahaanshaha Pull Bull
Helitaanka kuwa ugu fiican ee loo yaqaan 'Bull Bull'
Gunaanad: Adigu Adigu Miyaa Loogu Tala Galayaa Godka Godka Dibida?
Si aan wax uga ogaano asalka American Pit Bull Terrier asalkiisa, waxaan u baahanahay inaan dib ugu laabano waqtigii England qarnigii 19aad.
Dibida iyo bahashu baiting waa isboortiga dhiigga taas oo ku lug leh eeyo la dul dhigo dibi la qabtay ama orso madadaalo. Ingiriisku wuxuu bilaabay inuu tarmo xariiqa eeyo leh xoog, tayo isboorti oo loogu talagalay hawshan, markaa dhalashada Bull iyo Terrier dhala.
1835-kii ciyaartooydaan waxaa lagu cadeeyay inay yihiin sharci daro dabeecadooda ka baxsan bini'aadanimada darteed. Nasiib darrose, tani waxay dhalisay ku-xigeen kale oo naxdin leh: dagaalka eyga.
Dagaal eeygu weligiis wuxuu u beddeli lahaa dariiqa taariikhda ee jinsiga oo uusan u roonayn kan ka sii wanaagsan.
Dadka ku lugta leh la dagaallanka eeyga waxay bilaabeen inay soo bandhigaan hiddo-wadeyaal cusub oo loogu talagalay isku-darka 'Bully' si loo abuuro xariiqa eeyaha oo aad u dagaal badan.
Si xiiso leh oo ku filan, waxay ku dadaalayaan inay abuuraan nooc kaas oo ahaa kaliya ku dirir eeyaha laakiin ma qaniini doono kuwa dadka ka shaqeeya. Godka Bull Bull Terrier-ka ayaa leh astaantan oo wuxuu leeyahay dabiici rabitaan la'aan in la weeraro aadanaha.
Laga soo bilaabo dagaalladii eyga ilaa eeyaha
Markay soogalootiga bilaabeen inay keenaan noocyadaan jir dhiska ah iyo kuwa difaaca Terrier-ka Mareykanka, waxay ku raaxeysteen nolol cusub oo ka fog dhiiga iyo gumaadka faraantiga dagaal eeyaha.
Eeyahaas isu-eg waxay ahaayeen fiiqan, dhaqaaqa, adag oo feejigan. Waxay sidoo kale ahaayeen arday si dhakhso leh wax u barta oo u hamuun qabay inay ka farxiyaan.
Terror-ka waxaa loo adeegsaday ugu horreyn sidii eeyaha beeraha , hadday ku wehelinayeen milkiileyaasha safarada ugaarsiga ama xoolaha iyo hantida ilaaliya. Waxaa sidoo kale loo adeegsaday sidii eeyaha , dabacsanaanta ay ula dhaqmaan carruurta darteed.
Nooc cusub oo loo yaqaan 'Bull Dog' ayaa ka soo baxay khadadkaas 'Terrier bloodlines', waana uu ka weynaa asal ahaan Ingiriisigii asalka ahaa. Waxaa loogu magac daray Godka Dibida Maraykanka , oo ka helay UKC 1898.
AKC-da ayaa aakhirka aqoonsan doonta sidoo kale, laakiin ma yara jahwareer la'aan.
Is faham la’aan weyn oo ku saabsan Pull Bulls
Waxay ahayd ilaa 1930s in AKC u aqoonsado American Pit Bull Terrier inuu yahay saafi.
Hadda, halkani waa halka ay ku wareersan tahay. Markii aakhirkii la aqoonsaday nooca, AKC wuxuu magaciisii ​​ka beddelay American Pit Bull Terrier oo loo beddelay Mareykanka Staffordshire Terrier (Shaqaale)
Waxay sidan ku sameeyeen kalagoynta taariikhda dagaalka eeyga laga bilaabo sumcadda caatada. Waqti ka dib, eeyaha u diiwaangashan sidii American Staffordshire Terriers ayaa la soo saaray sida ay sheegeen heerka , haynta astaamo gaar ah oo ka dhigay mid lagu kala sooco.
Sida eeyaha aan u diiwaangashanayn ama aan loo soo saarin heerka, waxay noqdeen dhiiga sii socda ee Casriga Ameerikaanka Pit Bull Terrier.
American Pit Bull Terrier vs American Staffy: isku mid ma yihiin?
Tan iyo markii AKC uu sameeyay isbadalkii taariikhiga ahaa ee taariikhiga ahaa, hal su'aal oo taagan ayaa wali sii wada wareerinta dadka jecel eeyga.
Ma yihiin Godkii Bull Bull Terrier iyo Mareykanka Staffordshire Terrier laba nooc oo kala duwan mise waa isku eey?
Qaarkood waxay ku doodi doonaan inay isku mid yihiin, laakiin waxaa jira kuwa sheegaya in Shaqaalaha ay ka yar yihiin cabbirka iyo, guud ahaan, gebi ahaanba ka duwan qaababka.
Waa kuwan qaar ka mid ah kala duwanaanshaha ugu weyn ee lagu dhawaaqay labada nooc:
Shaqaalaha ayaa loo kariyay in loo isticmaalo a show eyga , halka Pittie aan loo tixgelinaynin riwaayad.
Dhismaha shaqaalaha ee 'Staffy' waa ka gaaban, ka sii dheereeya oo ka culus .
Labada noocba waxaa loo tixgeliyaa sidii eeyaha qoyska u fiican leh anshax wanaag. Markay u soo degto midka adiga adiga loogu talagalay, runtiina waxay kuxirantahay doorbid shaqsiyeed.
Ma waxaad dooneysaa inaad maal gashato eey ka qeyb qaadan doona tartamada? Hadday sidaas tahay, markaa shaqaaluhu waxay u badan yihiin xulasho wanaagsan.
Laakiin, haddii aad rabto oo kaliya eey wehel ah oo aan waligiis kaa yeeli doonin, APBT waa jidka loo maro.
Xaqiiqooyinka Degdegga ah ee loo yaqaan 'Bull Bull Terrier'
Aynu ku quusinno waxyaabo xiiso leh oo waji xambaarsan oo ku saabsan daaqada!
Sababtoo ah sumcadda Pittie eey khatar ah, waxay noqon kartaa mamnuuc magaalooyinka ama gobolada qaarkood (sida kuwa Adhijirka Jarmalka iyo Gariiradda ). Haddii aad leedahay Pittie oo aad qorsheyneyso inaad safarto, hubi inaad ogtahay waxa sharciyadu yihiin halka aad ku socoto.
The dhaqanka eyda yar runtii waxaa wakiil ka ahaa Godka Godka Bull Terrier. Kaliya weydii kuwa caan ka ah Dibi Dibi: Petey , oo ka socda bandhigga caadiga ah ee Little Rascals, Usha , Masterka kabaha Buster Brown, iyo Nipper , eeyga RCA.
Intii lagu guda jiray WW1, boodhadhka dacaayadaha ayaa adeegsaday noocyo ey kala duwan si ay u matalaan waddan kasta oo ku lug leh. Mareykanku wuxuu u doortay Territor Bull Terrier-ka Mareykanka dartiis geesinimo iyo daacadnimo.
Dibi Dibi ha lihin daamanka qufulka. Ma jiro farsamo jireed oo awood u siineysa hawsha 'qufulka'. Fikraddan khaldan waxay si aan cadaalad ahayn ugu kordhineysaa sumcadooda eey rabshad leh.
Dhismaha jireed ee loo yaqaan 'American Pit Bull Terrier' waxaa la barbar dhigi karaa midka sumcad xumida Daa’uud taallo uu dhigay Michelangelo. Runtii waa kaamil muruq.
Hadday waligeed jirtay eey jir ahaan isu beddelmi kara, Pit Bull waa sidaas. Gaaban oo xarago badan, waxay gaaraysaa dherer ah 21 inji (53 cm) culeyskiisuna waa 85 rodol (38 kg)
Muruqyada oo ku jajabiyey jaakad dhalaalaysa hoosteeda lugaha gaagaaban iyo jidh caato ah taasi waa si dhakhso leh oo dhaqso badan. Madaxa ayaa ballaaran oo leh daamanno waaweyn oo u muuqda cabsi gelin.
Koodhka American Pit Bull Terrier waa ma aha hypoallergenic , laakiin waa daadasho hoose . Koodhku wuxuu u baahan yahay daryeel yar. Hal usbuuc usbuuc ayaa ku filan inay ku ilaaliso jaakadeeda caafimaad.
Koodhka timaha gaaban wuxuu ku imaan karaa midabbo midabbo qurux badan leh, oo ay ku jiraan buluug, casaan, madow, caddaan iyo birimoole.
Indhaha balaaran ee Pitty ayaa si gaar ah u qurux badan. Ma aha oo kaliya inay noqon karaan hooska cajiibka ah ee huruud, cawl, cagaar, bunni ama buluug laakiin waxay muujinayaan diirimaad iyo jacayl.
Marabtaa inaad aragto muruqyadaas oo ficil ah? Fiiri fiidiyowgaan oo muujinaya Bull Bull oo kor u boodaya derbi:
Dhagaha Mareykanka ee Godka Bull Terrier: ma la gooyey mise lama goyn?
Maraakiibta Mareykanka ee loo yaqaan 'Bull Bull Terrier' oo leh dhago aan xirneyn ayaa noqda meel caadi ah iyada oo dib-u-dhac ka dhan ah dhegta eyga la jaray ay faa'iido heshay. Caadi ahaan, dheguhu waxay isku laaban yihiin dhinacyada madaxa waxayna u jilicsan yihiin taabashada.
The heerka caadiga ah wuxuu u yeerayaa Terminal Bahal Mareykan ah oo leh dhego goos goos ah, taas oo ka dhalanaysa goorta maqalka dhegta dibaddu ay tahay qalliin laga saaray si eeyga loo siiyo dhago u eg, yeey u eg yeey.
Dhaqankan ujeedo maleh aan ka ahayn in eyga si qurux badan looga dhigo garsoorayaasha bandhigyada eyga.
Weli, waxaad ka heli kartaa Dibi Dibi oo leh dhago goos goos ah ama aan la jarin, maadaama kan dambe sidoo kale caan ku yahay xayawaankan.
Daaman xoog leh oo leh xoog qaniinyo ah 235 PSI
Mid ka mid ah astaamaha lagu garto Pull Bull waa iyada daaman xoog leh . Waxay jecel yihiin inay wax calaliyaan, haddii la kiciyana inta lagu guda jiro ciyaarta loo yaqaan 'tug-o-war' ee ay ku ciyaaraan toy, way qaniini doonaan oo hoos u dhigi doonaan go'aan weyn.
Waa sidee awoodda ay leedahay qaniinyada Pit Bull? Aynu isbarbardhigno qaar ka mid ah eyda kale ee adkaysiga leh si loo helo fikrad.
American godka Bull Terrier vs American Bulldog
Bulldog-ga Mareykanka waa nooc kale oo leh murqo, madax weyn iyo daamanka ballaaran. Waxay leedahay qaniinyo ka xoog badan 305 PSI.
Waxay la wadaagtaa taariikh la mid ah Pit Bull, oo leh asal ahaan taranka England. Waxaa loo soo saaray ugaarsi iyo isku soo uruurinta xayawaanka, sidaas darteed sidoo kale waa awood badan tahay.
Bulldogs Mareykan ah
Farqiga weyn ee u dhexeeya noocyadan ayaa ah waxa iyaga ku dhiirrigeliya inay soo bandhigaan xooggooda weyn. Pit Bull waa nooc shucuur ah, oo aan si dabiici ah ugu dagaallamin aadanaha. Bulldog, in kasta oo ay jeceshahay qoyskeeda, way noqon kartaa lama saadaalin karo xagga dadka ma oga.
Markaad isbarbar dhigto awooda labadan eeyo, Bulldog waa guuleystaha guud sababtoo ah xoogaa qaniinyo sareeya iyo saadaalinteeda.
The Feedhyahan eygu wuxuu gadaashiisa uun ka dambeeya Yoolka Bull iyadoo leh qaniinyo qaniinyo ah 230 PSI.
Eygan ayaa ah mid dhaadheer oo camiran, kana dhigaya boodbood aan la rumaysan karin. Waxay leedahay heer tamar sare waxayna ubaahantahay jimicsi joogto ah.
Feeryahannadu sidoo kale waa eeyaha qoyska cajiib ah , aad u jecel oo macaan. Iyagu ma wadaagaan dagaal isku mid ah ama ilaaliyaha sumcadda eeyga ee Pitty.
In kasta oo labadan nooc ay leeyihiin xoogaa qaniinyo isku mid ah, sababo la xiriira dhaxalka Pit Bull, tartankiisa iyo dabeecadda ilaalintiisa, waa ammaan in la yiraahdo way ka adkaan kartaa Feeryahan.
Kuwa xoogga badan Rottweiler xoog qaniinyo waa 328 PSI . Ardaygan waa awood lagu xisaabtami karo markay tahay xoog, kacsanaan, iyo dulqaadasho.
Loosaaray sida a eyga shaqeeya , Rottweiler waa fududahay in la tababaro oo aad u caqli badan. Jir ahaan, waa mashiin!
Marka loo barbardhigo Qulqulka Godka Rottweiler wuxuu leeyahay gees marka ay timaado guud ahaan xoog iyo adkeysi.
American Pit Bull Terrier vs Jarmal Shepherd
The Adhijirka Jarmalka (GSD) waxay leedahay a 238 PSI , oo aan ka fogeyn Dulliga Godka.
Labadan nooc ayaa muuqaal ahaan aad ugu kala duwan, laakiin labaduba waxay wadaagaan sumcad darro aan khatar ahayn. Adhijirka Jarmalka sidoo kale waxaa badanaa laga helaa liisaska mamnuucista waxayna leeyihiin heer sare ilaalin ah anshax.
GSD waa mid ka mid ah eyda caqliga badan adduunka. Waa xulashada la doorbiday ee booliiska, militariga, iyo shaqada daaweynta. Tababbarku wuxuu si fudud ugu yimaadaa shaqadan sare ee waxqabadka leh, mana aha wax lala yaabo in GSD ay tahay tartan sare ee bandhigyada eyga.
Markaad isbarbar dhigto xoog, labadan taranka ayaa isku soo aadaya. In kasta oo xoogga qaniinyada uu la mid yahay, haddana GSD waa dhakhso badan oo dhaqaaqa . Caqligaas sare sidoo kale waxba ma yeeli doono.
Dhinaca kale, Pit Bull waa muruq iyo go, aan, oo wadista aan waligaa laga quusan.
Godkii Bull Bull Terrier wuxuu si deg deg ah sumcad ugu helay 'badass' giraanta dagaalka eeyga. Hoogay, waqtigan xiisaha badan ee naxdinta leh ayaa ku dhaca astaamaha, xitaa maanta iyo maanta.
Runtu waxay tahay, hiddo-wadaha Pittie si taxaddar leh ayaa loo xushay si loo abuuro dagaalyahan qiime leh, laakiin aasaaska ay leedahay asalka hiddo-wadaha ayaa ah naf dabacsan .
Maraakiibta Mareykanka ee loo yaqaan 'God Pull Bull Terriers' waa caqli badan oo u hamuun qaba in aad ka farxiso Iyaga ayaa hela kartida ciyaaraha, go'aan qaadashada iyo geesinimada Laga soo bilaabo maalmihii dibida la caayay.
Iyagu waa tartan waana sahlan yihiin in la tababaro. Tani waxay ka dhigeysaa in taranka uu soo baxo marka ay timaado tartamada eeyga.
Ha iloobin waqtiga eeyahaas loogu yeeri jiray eeyaha, sababtoo ah jacaylka dabiiciga ah ee carruurta . Dibi Dibi waa kuwo aad u daacad ah oo difaaca qoyska. Haddii keligaa lagaa tago muddo dheer, kala-go'id walaac gelin doonaa
Sida nooc kasta oo ey ah, si loo hubiyo in Ey Pull Bull uu korayo si uu u muujiyo astaamaha iyo dabeecadda ugu wanaagsan, barashada bulshada iyo tababbarkii hore waa qasab.
Digniin: Noocani maaha mid loogu talagalay qof walba!
Waxaad ubaahantahay inaad diyaar u ahaato maalgashiga waqti, lacag, iyo tamar si loo daryeelo Dibi Dibi. Kani ma aha eeygaaga dhabta ah ee fudud-tag-nasiib ee aad ku ridi karto boorsadaada markasta oo aad dareento sidan oo kale!
Godka loo yaqaan 'Pit Bull' ayaa 100% u heellan qoyskeeda, oo leh rabitaan xoog leh oo ah in la ilaaliyo. Laakiin waxaa laga yaabaa inay qaado mas'uuliyaddaas iyadoo aaminsan inay iyadu tahay hogaamiyaha xirmada.
Sida sayidkiisa, waxaad u baahan tahay tus inaad adigu masuul tahay . Tan macnaheedu waa ku hagitaan iyo toosin gacan adag, oo ay taageerto xoojin togan.
Tababarku wuxuu u baahan yahay inuu ahaado mid joogto ah , muddo. Tani waa sida kaliya ee aad uga guuleysan doonto madax adayga astaanta u ah astaamaha.
Madax adeyga oo lagu daray Pitty’s caqli iyo go’aan qaadasho ka dhig gacan mug leh haddii aan si fiican loo tababarin. Dabeecadani waxay la imaan kartaa cabsi gelin ama khatar ah, gaar ahaan markay ka imaaneyso eey muuqaal ahaan la yaab leh.
Waxaa muhiim ah in la xasuusto in kuwani ay yihiin astaamo ey badan eygu u nugul yihiin inay muujiyaan. Ha u ogolaan muuqaalada, taariikhda, iyo khuraafaadka aan la xaqiijin inay farageliyaan aragtidaada guud ee tarankaan.
The 3 hababka tababarka ugu fiican ee APBTs
Xusuusnow in tababbarku u baahan yahay inuu noqdo mid halis ah oo loo yaqaan 'Pull Bull'. Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad kireysato a tababaraha eyga xirfad leh si shaqada loo maareeyo. Haddii aad qorsheyneyso inaad qaadato hoggaanka, kuwan gaarka ah hababka tababarka wuxuu soo saari doonaa waxa ugu fiican Pitty-kaaga.
1. Bulsho hore
Tani waa inay saldhig u noqotaa nidaam kasta oo tababar eey ah nooc kasta ha lahaadeene. Soo bixida eeygaaga iyo la-dhaqanka bulshada carruurta kale, dadka waaweyn, iyo eeyaha waxay ka dhigeysaa mid xirfad yar oo xishood badan markay bislaato.
Haddii aad leedahay eeyo kale, eeyahaaga cusub ha la kulmo oo ha ku ciyaaraan banaanka.
Taasi waxay tiri, nooca Pull Bull wuxuu ku fiican yahay a guri leh deyr deyr leh . Guri yar oo yar ma bixiyo boos ku filan oo lagu jaangooyo oo la baaro.
Ballaaran deegaankaaga park eey oo halkaas Pitty-gaaga geeyso maalmaha fasaxa ah si ay ula qabsato aragtida iyo urinta wejiyo cusub. Ku bilow inaad iyada ku hayso xarig una oggolow iyada inay u dhawaato oo ay urin karto eeyaha saaxiibtinimada leh.
Ha u oggolaan in Pit Bull uu ka baxo xarigga eeyga. Haddii ay dhacdo in eeyga dagaal qarxo, go'aankeeda wuxuu yeelan doonaa dagaalkeeda illaa dhammaadka. Noocani dib ugama laaban doono marka laga xanaajiyo.
Godka Bull Terrier ee dhanka midig ( xigasho )
Sababtoo ah taariikhdooda dagaalka eyga, Pit Bulls waxay leeyihiin u janjeera dabiiciga dagaal ka muuji eeyaha kale .
Haa, isdhexgalka bulsheed ayaa fure u ah ka bixitaankeeda, laakiin tababarka adeecida ayaa siin doonta kalsooni iyo edeb ay raacdo adiga oo kugu tiirsan.
Sidii hore loo sheegay, Pit Bulls waxay jecel yihiin inay raacaan amarrada waxayna leeyihiin a tan oo tamar ah .
Ku biirista tababarka adeecida tababarka dhaqdhaqaaqa Kaliya maahan hab la yaab leh oo labadiinaba aad isku xiri kartaan, laakiin waxay ka dhigeysaa mid kiciya, ka caawin doonta gubida tamarta, iyo inay baraan inay idinka fiiriyaan marka ay sameyneyso dhaqaaqeeda xigta.
Awooda American Pit Bull Terrier awgeeda, sixitaanka xadhiga iyo ciqaabta badanaa waa lagu jujumayaa tababarka adeeca, laakiin waa had iyo jeer ma shaqeeyo for this taranka.
Isku day inaad isticmaasho tababarka gujiyaha ama abaal marin si aad ugu dhiirrigeliso Bull-kaaga Bull adigoo ku riixaya waxtarnimo.
3. Shahaadada Muwaadin Wanaagsan ee Canine
Barnaamijkan iyo shahaadadan waxaa soo diyaariyay hay'ada AKC. Eeyaha waxaa lagu tijaabiyaa dhowr xirfadood oo lagu qiyaaso addeecid iyo dabeecad. Haddii eey caddeyso inay iyadu xirfad kasta yeelatay, waxay heli doontaa Shahaadada Waddaniga ee Wanaagsan ee Canine.
Dabcan, eey kasta ayaa aadi kara barnaamijkan, laakiin waan xusaa maxaa yeelay waxay si gaar ah faa'iido ugu yeelan kartaa Bulls Pit.
Waxay kuxirantahay meesha aad ku nooshahay, way adkaan kartaa inaad guri kireysato sababo la xiriira sharciga ama milkiilaha guriga ayaa laga yaabaa inuu ka caga jiidayo sababo la xiriira sumcadda. Soo bandhigida shahaadadan waxay muujineysaa eeygaaga inuu soo maray tababarka iyo tijaabinta si loo dhiso dhaqan wanaagsan .
Dhameystirka barnaamijyada sida kan oo kale ayaa sidoo kale u ah tallaabo kale oo loo qaadayo baabi'inta wakiilka eyga xun ee Pittie.
Waxaad ka heli kartaa qiimeeyayaasha barnaamijka AKC halkan .
Heerka tamarta ee noocani waa mid halkaa taagan, oo kaaga tagaya cunug burburin ah haddii aysan helin hagaajinteeda jimicsi. Iyo waxay jeceshahay inay wax calaasho , si aad si fiican u hubiso inay ku bixisay tamartaan oo dhan, u oggolow inay ku rogto kabahaaga iyo alaabta guriga.
Filo inaad ugu yaraan u hurto hal saac maalin kasta inuu ciyaaro waqti. Waxaa jira siyaabo badan oo aad hal abuurnimo ugu sameysan karto Bull-kaaga.
Dhex lugee xaafadda.
U dhaqaaq jog wadada raad raac.
Ka shaqee bulshada dhexdeeda oo ku baashaal bustaha aagga eeyga.
Xulka xulashada alaabada lagu ciyaaro calalinta ee tayada leh gacanta ku hay maalmaha roobka. Dibi Bulls waxay jecel yihiin inay wax cunaan!
Samee an koorsada caqabadda guriga dhexdiisa si loogu dhaqmo dhaqdhaqaaqa.
Tani waa nooc aad u adag oo caafimaad leh. Bull Pit wuxuu leeyahay celcelis cimri dheer celcelis ahaan 12 ilaa 16 sano .
Ma jiro nooc eey ah oo ka difaacaya dhowr cudur oo hidde ah, laakiin, Pit Bull ma aha wax ka duwan.
Waa kuwan arrimaha ugu sarreeya ee Caafimaadka Mareykanka ee loo yaqaan 'Pit Bull Terrier' ee ay tahay in laga feejignaado.
Hypothyroidism: Cudurkani wuxuu weeraraa qanjirka 'thyroid' marka hormoon cayiman aan si ku filan loo soo saarin. Haddii aad ku aragto caajis maskaxeed, caajis, jimicsi la'aan, iyo cayilnaanta Pittie, wac dhakhtarka xoolaha si loo baaro.
Xasaasiyadaha: Dibi Dibi waa u nugul yihiin xasaasiyadda maqaarka kuwaas oo uga tagaya waxyaabo maqaarro qalalan oo cuncun leh. Nasiib wanaag, waxaa jira dhowr daaweyn dabiici ah oo loo qoray oo aad isku dayi karto. Kaliya la hadal dhakhtarkaaga xoolaha si aad u hesho xalka ugu fiican eeygaaga.,
Wadne xanuun: Loogu Talo Galay 'God Pull Bull Terrier' tani waxay ku imaan kartaa qaab cilladaha waalka, khaladaadka, iyo cilladaha wadnaha lagu dhasho.
Hip Dysplasia: Tani waa cudur hidde ah oo sababa koritaan aan caadi ahayn iyo cillad xagga kala-goysyada sinta. Hip dysplasia waa xanuun daran, ugu dambayntiina wuxuu sababayaa lumis iyo dhaqdhaqaaq la'aan.
Cayilka waa cunsur aad rabto inaad isha ku hayso markaad dooranaysid cuntada American Pit Bull Terrier.
Xulo qalalan tayo sare leh cuntada eyga taas ayaa loo qaybiyay laba cunto maalin kasta . Dibi Dibi, waxaa lagugula talinayaa inaad u adeegto wax aan ka badnayn 1.5 ilaa 2.5 koob qaadashada maalin kasta.
Maaddaama xasaasiyadda maqaarku ay dhibaato guud ku tahay noocyadan, kala hadal dhakhtarkaaga xoolaha cuntooyinka aad iska ilaalineyso iyo cuntooyinka kale ee run ahaantii gacan ka geysan kara hagaajinta xaaladda.
Qanjiraha Sanka Cas
Haddii aad jeceshahay noocyadan oo aad rabto inaad ku kacdo dhammaan eeyaha 'Pit Bull', u diyaargarow inaad soo saartid cajiinka culus.
Ubax yar oo loo yaqaan 'Pit Bull puppy' oo leh khadadka dhiigga sare ayaa ku kici doona meel kasta oo ka yimaada $ 2000 ilaa $ 20,000 . Qaar ka mid ah noocyada Pittie, sida a Qulqulka Sanka Buluugga ah iyo a Pitbull Sanka Cas , sidoo kale waxaa laga yaabaa in kharash badan
Ey yaryar oo yaryar oo leh xarigga dhiigga ee dhexdhexaadka ah ayaa weli qaali ah, oo leh kuwa wax iibsada oo lacag leh $ 800 ilaa $ 1000 eey kasta.
Taasi waa bilow. Mar alla markii aad iibsato eygaaga, waa waqtigii aad soo iibsan lahayd sahayda, aad ka heli lahayd dhakhtarka xoolaha, aad daaweyn ku samayn karto, kana fikirto tababarka.
Aynu kala qaadno kharashyada sanadlaha ah.
Diiwaangeli iyo tags: Ka hubi gobolkaaga si aad u ogaato haddii Pit Bull uu u baahan yahay sumado gaar ah ama uu u baahan yahay in la diiwaangeliyo. Tani waxay ku kici kartaa ku dhowaad $ 50.
Imtixaanada sanadlaha ah ee caafimaadka: $ 250
Caymiska Caafimaadka Xayawaanka: $ 225
Bixinta ama dheecaanka: $ 200
Qalabka iyo alaabta lagu ciyaaro: $ 300
Cuntada: $ 120
Fadlan maskaxda ku hay in kuwani yihiin qiyaas uun! Kharashaadka sanadlaha ah waxay ku xirnaan doonaan baahiyaha gaarka ah eeygaaga, noocyada aad iibsato, nooca qorshaha caymiska ee aad dooratay, iyo inaad tababar qaadatid ama aad shaqaaleysid xirfadle.
Qodobka ugu muhiimsan halkan waa taas waxaad u baahan tahay inaad fahanto in eey raqiis ahayn . Ma ahan alaab aad ku ciyaareyso oo aad ku bixin karto qiime bilow ah ka dibna u daa in ay duurjoogto ku socoto.
Qalbigaagu wuxuu diyaar u noqon karaa eey, laakiin jeebkaagu ma diyaar yahay?
Kahor intaadan go'aan gaarin, fadhiiso oo ka shaqee miisaaniyad bille ah si aad u qiyaasto inta lacag ee dheeriga ah ee aad u baahan tahay si aad u siiso Dibi Duliga daryeelka ku habboon iyo raaxada.
Haddii aad ka raadsato breeders American Pit Bull Terrier online, waxaad si dhakhso leh u ogaan doontaa inay jiraan xamuul 'em. Waa kuwan wax soosaarayaal APBT ah oo aad iska hubin karto:
Pitbulls-ka Ugu Fiican Ayaa La Sameeyay (Tennessee)
Noocani waa meel walba, in kasta oo sumcad-hoosaadku leeyahay, taas oo adkeyneysa kala-soocidda wanaagsan ee ukunta xun.
Baadhitaan qotodheer ayaa loo baahan yahay si loo helo eeyaha ugu fiican adiga. Iyada oo loo yaqaan 'Bull Bull,' xaqiiqdii waxaad dooneysaa inaad raadsato breed oo leh jacayl ku saabsan taranka, mudnaanta tayo ka badan tirada.
Mashiinka eeyaha waa faafaa, iyo bozos-yada ka shaqeeya ganacsiyadaan bini'aadamnimada ka baxsan ayaa sheegi doona ama sameyn doona wax kasta oo ay u baahan tahay si ay dhaqso ugu helaan. Waxaa laga yaabaa inaad ku dhameysato eey dhiig leh, taas oo macnaheedu yahay inuu u nugul yahay cudurada iyo dhibaatooyinka dhaqanka.
Waad ogaan doontaa inaad heshay dabeecad anshax leh haddii ...
Waxay ku faanaan inay ka mid yihiin bulshada Pitty. Raadi baadiyeyaal ka tirsan naadiyada cawrada la ixtiraamo. Waxay sidoo kale diiwaangelin doonaan eeyahooda, iyagoo muujinaya mas'uuliyad iyo u heellan sidii ay u ilaalin lahaayeen heerka cawdu.
Waxay rabaan inaad la kulanto waalidiinta. Fiiri waalidiinta eey yar si loo hubiyo caafimaad wanaagsan iyo khadadka dhiiga oo adag. Dabeecadda waalidkeed waxay wax badan ka sheegtaa dabeecadda suurtagalka ah ee ardayga.
Waxay kugu casuumayaan gurigooda booqasho: Kalkaaliyaha anshaxa ayaa jecel inuu kugu soo booqdo goobta eygu ku dhashay kuna koray. Habkaas, waxaad ku soo indha indheyn doontaa xaaladaha guriga eey eygu ugu horreeyo.
Waxay ka walaacsan yihiin daryeelka eeyahooda: Abuuristu waa inuu bixiyaa nadiifin caafimaad, tixraacyo dhakhaatiirta xoolaha ah, iyo markhaatiyo laga helo macaamiishi hore. Waxay sidoo kale xiriiri doonaan ka dib iibsashada bilowga ah si loo hubiyo in xilliga kala-guurka uu si habsami leh u socdo.
Qaadashada & samatabbixinta Godka Bull Terrier-ka iyo samatabbixinta
Thanks to mills puppy, dog dog iyo milkiileyaasha aan xamili karin masuuliyada noocyadan, layaab ma leh inay jiraan Dibiyo badan oo godad ah oo ku dhammaada hoyga.
Haddii korsashada ay sii kordheyso luuqdaada, fiiri kuwan Samatabbixinta Godka Bull Terrier.
Xun xun (Kaalifoorniya)
Jacaylka Rotta Plus (Minnesota)
Badbaadinta Dibi Dibida (Missouri)
Samatabbixinta Biggies Bullies (Pennsylvania)
Aasaaska Beerta Xayawaanka (New York)
Eeyadu waxay jecel yihiin American Pit Bull Terrier
Markaad tan aqriso, waxaa laga yaabaa inaad ku soo gabagabeyso in Dulliga Godka uusan adiga kuu ahayn. Waa caadi! Noocani waa mid dalbanaya waqti dheeri ah iyo masuuliyad.
Ha dareemin niyad jab! Waxaa jira noocyo kale oo fara badan oo waxoogaa Neef ah ku dhex jiraan. Fiiri iskudhafka caanka ah ee loo yaqaan 'Pit Bull':
Godka Godka jeebka
Isku Darka Bull Boxer Mix
Godka Bull Chihuahua Mix
Godka Dibida Husky Mix
Jarmalka Shepherd Pit Bull Mix
Godka Dibida Lab Lab
Pitbull Mastiff Isku qas
Isku-darka Dahabka Dahabka ah ee 'Pitbull Mix'
Taasi waa duub! Hadda oo aad si dhammaystiran u eegtay American Pit Bull Terrier, ma jiro wax khilaaf ah oo ah in tani tahay nooc muran leh.
Waxay qaadataa a nooca gaarka ah ee eyga leh yaa leh hammi iyo waqti uu Pittie siiyo tababarka ay u baahan tahay.
Noocani wuxuu ku habboon yahay qof ma shaqeeyo ama ma safro wax badan.
Milkiilaha saxda ah eeygan ayaa fasax qaadan kara maalin kasta si ay Pitty-gooda ugu soo baxaan jimicsi.
Eygan ayaa ku dhegan milkiilahiisa, sidoo kale, sidaa darteed uma istaagi karo inuu reerka ka fogaado muddo dheer waqtiga.
Haddii aad ku nooshahay guri yar oo magaalada ka mid ah, Pittie waxaa laga yaabaa inaanay kugu habboonayn adiga. Maaddaama Dulliga Godku yahay mid dhexdhexaad ah oo leh tamar sare, a guri leh deyr ku habboon baahiyaheeda firfircoon.
Ugu dambeyntiina, waxaad u baahan tahay inaad samir yeelato, isdaba-joog ah, oo aad u heellan tahay tababarka. Gorgor Bull wuxuu u baahan yahay milkiile u dhaqmi kara sida kuwa oo kale alfa ee xirmada si loo joojiyo madax adayga iyo gardarada.
Maxaad u malaynaysaa ku saabsan Godka Godka Bull Noo sheeg faallooyinka!
Shaybaadhka shukulaatada oo lagu daray eeyaha pitbull
pitbull chihuahua isku darka cabbir buuxa oo koray
intee in le'eg ayay helayaan chihuahuas pomeranian
maxaad u taqaan shih tzu poodle mix